समर्थन र आत्मबोध: 'संस्कृत जिवन जिउने भाषा पनि हो' | Citizen Post News
अधिकांश संस्कृत भाषाको विरोध गर्नेहरू परायाले मतिभ्रष्ट पारिएका अभिशप्त जमात हुन् । तिनका न कुनै गरिमामय ईतिहास छ, न यही मति कायम रहिरहे भविष्यमा हुनेछ । दुनियाँमा सबै प्राचीन समृद्ध भाषामा साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृतिजस्ता ज्ञान समाहित भएको हुन्छ । भाषाको अध्ययन गरे पो तिनको लाभ लिई प्रबुद्ध भईन्छ । जसको ईतिहॉस गरिमामय छैन वा जसले आफ्नै ईतिहासलाई दुत्कार्छ ती समाजमा पनि स्वतः दुत्कारिदै पहिचानबिहीन हुदै गएका हुन्छन् ।
तिनलाई विश्वका अन्य समाजले सम्मान पनि गर्दैन । हिङ नभए पनि हिङ राखेको टालो हुनुपर्छ । अरे बाबा १ शास्त्रमा लेखिएका कुराको आलोचना गर्न मिल्छ तर भाषाकै बिरोध गर्नेहरूको मति झन् कस्तो हुँदो हो, म यदाकदा गम्नेगर्छु ! तिनका न टेक्ने भुईं, न ओतलाग्ने छाना हुदो हो ! संस्कृतका विषद शास्त्रहरूको अध्ययन गुरूको सहारामा गर्नुपर्छ । यसो नगरेमा तिनको मगज सड्किन सक्छ, तिनले शास्त्रलाई नै दुत्कार्दै मूर्ख सिद्ध हुन सक्छन् । यसका लागि संस्कृतका महान टिप्पणीकार वा भाष्यकारको मात्र सहारा लिनु ठिक हुन्छ ।
संस्कृत साहित्य अकसर छन्द र सूत्रमा हुने हुनाले सतर्क हुनुपर्छ । सुरूमा विवेकानन्दको ब्याख्यानको सहारा लिनु उपयुक्त हुन्छ । अरू भाषाको तुलनामा नेपालीलाई संस्कृत सिक्न सजिलो हुन्छ । हामीले प्रयोग गर्ने ५० प्रतिशत शब्दहरू संस्कतबाटै आएका छन् अथवा संस्कृतका ५० प्रतिशत शब्द दैनिक प्रयोग गरिरहेका छौं । संस्कृत भाषामार्फत सृजित बिज्ञान, साहित्य र दर्शनको रसस्वादन गर्नबाट अहिलेको र भावी पुस्ता बन्चित हुन हुन्न।
संस्कृका विद्वानहरू पनि एकले अर्काको भाषा साहित्यको खुबै आलोचना गर्ने गर्थे । ‘वादे वादे जयते तत्वबोध’ संस्कृत तत्वबोध गर्ने प्रकृया नै हो । भतृहरि र चार्वाक जस्ता ऋषिमुनिका लेखन पढे बुझ्न सकिन्छ । तर शास्त्रास्त्रबाट जो विजयी भयो अर्काले आत्माबाट स्वीकार्ने गर्थे । शास्त्रमा वादबिवाद गर्न यसका निम्ति सभा लाग्थ्यो । शास्त्रीय डान्स वा नाट्य शास्त्रका पिता भरतमुनि हुन् । उनले डान्स के कसरी गर्ने यसबारेको शास्त्र लेखेका थिए भने बात्सायनले यौनबिज्ञान कामशास्त्र लेखेका हुन् । यी दुबै संस्कृतका मुर्धण्य विद्वान थिए ।
संस्कृत भाषालाइ गिर्वाणी वा देवभाषा पनि भनिन्छ । संस्कृत मन नपर्ने, यसको बिरोध गर्ने वा यसलाई घृणा गर्नेलाई झन् संस्कृत भाषा सिकेर संस्कृत साहित्य पढेर बुझेर आफ्नो बमनलाई अझ गन्हाउने पार्ने क्षमता तिखार्नु लाभ हुन्छ । सकिन्छ भने संस्कृत भाषामै लेखेर बोलेर उछित्तो काटे हुन्छ । संस्कृत अरू भाषा जस्तै एक परिस्कृत , बैज्ञानिक प्राचीन तर अत्याधुनिक अभिव्यक्तिमैत्री भाषा न हो । कुरा नबुझी कौवाले कान लग्यो भनेर कौवाको पछि दगुर्ने र अरूले के के बके त्यसलाई पढेर उद्दरण गर्नेहरू सेकेन्ड ह्याण्ड बमनकर्ता मात्र सिद्ध हुन् ।
ती बरू फर्स्टह्याण्ड बमनकर्ता बने हुने । कार्ल मार्क्सलाई लगभग विश्वका सबै प्रमुख भाषाको ज्ञान थियो । उनले दास क्यापिटल लेख्दा उल्लेख गरेका रिफरेन्स सामाग्री सूचि हेर्दा नै मान्छे अवाक् पर्थे भनिन्थ्यो । उनले पढेको सम्वन्धित महत्वपूर्ण तत्कालिन विश्वमा कुनै साहित्य छुटेको थिएन भनिन्थ्यो । संस्कृत जिवन जिउने भाषा पनि हो । आयुर्वेद आरोग्यबिज्ञान हो । जुन खाने वा पिउने कुरामा जति धेरै पानी हुन्छ त्यति बढी श्रद्धा, सम्मान र माया दर्शाई नमस्कार वा निधारमा ढोगेर खानुपर्छ भन्ने वैदिक शास्त्रीय ज्ञानलाई हालका बैज्ञानिक खोजले पुनर्पुष्टि गर्न थालेको छ । जिवनलाई उर्जाशील र स्वस्थ राख्न पानी सही तरिकाको, सही प्रकृयाले पिउनु खानुपर्छ ।
किनभने पानीमा स्मरण हुन्छ र सही स्मरण भएको वा पारिएको पानी मात्र पिउनुपर्छ । जर्मनी र जापानमा गरिएका अनुसन्धानले पानीमा पनि जिवमा जस्तै स्मरण शक्ति र स्मरण हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेको छ । सनातन धर्मले जबसम्म तपाईं आफै बोध गर्नुहुन्न कुनै कुरालाई पनि बिश्वास नगर्नू भनेको छ । त्यसैले आत्मबोध जीवनको लक्ष हो, मोक्ष भनेको आत्मबोध हो । अरू कुरा जिवन चलाउनेसम्म हुन्, जीवनको आनन्द आत्मबोध हो । संस्कृतले जिवनबोध र आत्मबोध गराउन मद्दत गरिरहन्छ । (लेखकः नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् )